मलेसियामा नेपाली युवकको रोदन : मेरो एउटा खुट्टा खोइ ? ::Nepali TV
You are here : Home News मलेसियामा नेपाली युवकको रोदन : मेरो एउटा खुट्टा खोइ ?
क्वालालम्पुर । खुट्टा सुन्निएर हिँड्न नसक्ने भएपछि कम्पनीले उनलाई अस्पताल भर्ना गरिदिन्छ । थाहै नदिई अपरेसन गरिन्छ । जब होश खुल्छ, अनि थाहा पाउँछन् आफ्नो एउटा खुट्टै छैन ।